China Party Decoration Happy Birthday Flag Banners Birthday Garland Banner Manufacture and Factory |SIUMAI
uye kujekesa dingindira repati.
Yedu yekumashure tapestry inogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.Semuenzaniso, mitambo, mafirimu, mitambo, nezvimwewo Tapestries inogadzirwa ne100% polyester.Iro jira rine simba rakakwirira, kupesana kwemaitiro uye elasticity yakasimba.Kuramba uchikwesha jira kunogona kukurumidza kudzorera chimiro chayo chepakutanga.Kudhinda pamucheka kwakajeka, uye maitiro akanaka uye akanaka anogona kugadziriswa.
Zita Birthday Tapestry
saizi 100x70cm; 150x130;200x150 Saizi yese inogona kugadzirwa
MOQ HAPANA MOQ
Kudhinda OEM / ODM iripo
Delivery 7-45 mazuva ekutumira
Bhegi reOPP richarongedza chigadzirwa, uye chigadzirwa chinosanganisira makadhi gumi nematatu eHAPPY BIRTHDAY muChirungu + 5M marebhoni akareba akanaka eruvara rumwe chete.
1. Tekinoroji yepamusoro yekudhinda, kucheka kwakajairwa, kutsetseka uye kusina burr.
Shandisa yazvino otomatiki yekutsikirira tekinoroji kuchengetedza kudzvanya chiyero, kusimba kwakaringana, uye kutsetseka.
2. Iyo hupamhi hwetambo inoyevedza, uye yakakwirira-yemhando mbishi inoshandiswa.
Kusiyana kwemavara uye mavara, chigadzirwa chakapedzwa chine ruvara rwakanaka uye rwakasiyana-siyana.Mamiriro akanaka, akatsetseka uye asingakwenye, kukwenya kwakasimba.
3. High-quality white card, high-definition kudhinda, kupisa kutsika kupera.
Sarudza chena makadhibhokisi akagadzirwa gobvu, akasimba uye akachena emhando yepamusoro yehuni pulp.Iine maitiro ekutsvedzerera kwepamusoro, kuomarara kwakanaka, kutaridzika kwakanaka uye kuenzana kwakanaka.Inogonawo kudhindwa pane zvinhu zvinodiwa nevatengi.
4. Nguva yekugadzira.
Iyo chaiyo yekugadzirisa nguva kana tsika yemaitiro zvinodiwa zvichienderana nehuwandu hwakawanda uye zviratidzo, kazhinji mukati me7-10 mazuva ekutumira.
5. Nezve mutengo.
Mutengo wemamureza akagadziridzwa uchatemerwa zvinoenderana nemaitiro ekugadzira, zvakatemwa uye huwandu, uye inogona kunge yakasiyana zvishoma nemutengo wenguva dzose.Isu tichadzorera mutengi wese neakanakisa mutengo-kuita reshiyo.
6. Mufananidzo maitiro.
Yenguva dzose kugadzirisa inongoda kupa Al.PS.CDR uye mamwe mavector mafaera kana JPG yakakwirira-tsananguro mifananidzo mikuru yevagadziri vedu kugadzirisa chimiro chitsva.Isu tichanyatso simbisa uye nekutarisa nevatengi mune yega link senge zvinhu zvenyama, dhizaini zvinyorwa, zvehunyanzvi kutaura, nezvimwe.
Zvigadzirwa muchitoro chedu zvese zvinotorwa mumhando.Nekuda kwemakona ekupfura akasiyana, mabhechi ekuvhenekesa uye kudhinda, panogona kunge paine kushoma kwechromatic aberrations.Isu tichatumira sampuli kune vatengi pamberi pega kugadzirwa kuti tive nechokwadi chekuita kwakanyanya kwemirairo.
2. Nezve kunaka:
Wese munhu anotengesa akabatana nemutengi achave ane mutoro wekuraira kusvika kumagumo.Ivo vanozonyatso tarisisa kugadzirwa kweodha yako uye vanokupa masampuli makuru.Panguva imwecheteyo, isu takashongedzerwa nehunyanzvi QC kutarisa mamiriro ekugadzirwa kwezvinhu kuti tive nechokwadi chekuti zvinhu zvemhando yepamusoro zvinogona kuendeswa kune vatengi.
SIUMAI packaging yakashongedzerwa nevagadziri vakanakisa kubatsira vatengi kugadzirisa zvigadzirwa zvavanoda.Isu tichaitisa hunyanzvi docking nevatengi maererano nezvinhu, dhizaini pfungwa, uye dhizaini yekupedzisa.
4. Nezve mushure mekutengesa sevhisi:
Kana chigadzirwa chacho chiine matambudziko emhando, isu tichagadzira timu yekuongorora mhando inosanganisira yemhando yekuongorora, kutengesa, uye maneja mukati memaawa makumi maviri nemana.Zvinoenderana nedanho rekutanga: Ongororo Yekutanga;danho 2: Kuongorora;nhanho 3: Solution, tora matanho mukati meawa 72 kupa vatengi mhinduro dzinogutsa.
Zvakapfuura: Bato Seta bepa Hats Birthday Party Supplies
Zvinotevera: Color Printing Packaging Chocolate Tea Storage Paper Tube
Party Backdrop Decorations Party Supplies Yakareba ...
Kushongedzwa kweyadhi yekuzvarwa Birthday Banner Deco...
Kushongedzwa kweKisimusi kunopa Mapepa mashanu Nyeredzi P...
Bato Seta bepa Hats Birthday Party Supplies